Hooyada dhashay Xidiga Man City ee Nolito oo ka Tuugsata suuqyada Magaalada Sanlúcar de Barrameda ee dalka Spain+Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Hooyada dhashay Xidiga Man City ee Nolito oo ka Tuugsata suuqyada Magaalada Sanlúcar de Barrameda ee dalka Spain+Sawiro
Cayaaryahanka kooxda kubada cagta Manchester City ee lagu Magacaabo Nolito ayaa waxaa lasoo daristay Xaalad Fadeexad ah kadib markii lacadeeyey in Hooyadii ka Tuugsato Magaaladii ay isaga ku dhashay ee Sanlúcar de Barrameda Magaaladaas oo ku taala Waqooyi bari dalka Spain.
Rocio Agudo Duran oo 46 Sano jir ah waa Hooyada dhashay Xidiga Manchester City ee Nolito kaas oo Mushaar ahaan u qaata Todobaadkii lacag dhan £100,000 mana haysato Wax Lacag ah Waxa ayna ka dawarsataa Suuqayada dhawaana waxaa laga soo saaray Gurigii ay daganeyd markii ay Kirada iska bixin weysey.
Hooyada dhashay Nolito Rocio Agudo Duran ayaa dhawaan ka soo baxday Xabsi Markii laga xiray Goob hablaha Jirkooda ka Ganacsada ay deganaayeen waxayna Markaas isticmaaleysey daraagiska Nuuca loo yaqaan heroin iyada oo lagu Xukumay 2 Sano Xabsi ah.
Nolito Hooyadii ayaa ku Calaa cashay wiilkeygu waxa uu qaataa Lacag aad u badan aniga iyo 2 Mataano ah oo isaga ladhalatay oo lagu kala Magacaabo Candela iyo Jesus,Waxaa nalaka Saaray Gurigii aan deganeyn Markii aan iska bixin weyney Kiradii Gurigaas oo Markii horeba ahaa mid Wasaq badan ayna ku yaaleen Godad badan oo Jiirku galo dhib badana aan ku qabnay.
Ninkaan garabka ka dheela ayaa lasheegayaa in uu Gooyey Xiriirka Hooyadii Markii ay mur meen Horaantii 2015 kii Markaas oo uu sidoo kale Joojiyey in siiyo Lacag ay biishaan isagana bixiyaan kirada Guriga.
Wargeyska Marca ayaa daabacay in Rocio Agudo Duran oo ah Hooyada Nolito ay dhawaan tagtay Guriga qasriga ah ee uu deganyahay wiilkeeda oo leh 3 Caruur ah iyo Hooyadood iyada oo wadata boor ay ku qoreyd waxaan ahay Hooyada Nolito waxaan doonayaa in aan Jaariyad ahaan uga shaqeeyo Guriga wiilkeyga si aan isaga bixino Kirada Guriga una helno Cunto aan Cuno.
Islaanta dhashay Cayaaryaahnka Manchester City ee Nolito ayaa lasheegayaa in ay iska dhiibtey wiilkeeda oo socod barad ah kadib markii lagu Xukumey Xabsi dheer Waxaana soo Korsaday isla Markaana Heer fiican Gaarsiiyey Awoowgii iyo ayeydii Manuel iyo Dolores kuwaas oo Geeriyoodey 8 Sano ka hor.
Xidiga Manchester City ayaan ka jawaabin hadalada ka soo yeeraya Hooyadiisa oo lagu baahiyey baraha bulshada waxaana uu weli sii wataa shaqadiisa Caadiga ah ee Naadigiisa Manchester City.